Belata nha foto gị na Lossless Photo Squeezer | Esi m mac
Mgbe anyị nwere mkpa iji ọtụtụ foto rụọ ọrụ, ọkachasị mgbe anyị gara ihe omume chọrọ ya, na dabere n’etu mkpịsị aka anyị dị mgbe anyị na-ese foto, o yikarịrị ka anyị ga-ezukọta na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke faịlụ , faịlụ ndị anyị ga-amanye ịkekọrịta site na ngwa izipu ozi, netwọkụ mmekọrịta ma ọ bụ ndị ọzọ.
Iji belata oke ha ma mee ka ọ dịkwuo mfe ịkekọrịta ha, ọ kachasị mma belata nha ha iji belata oge iji mee ya. Na Mac App Store anyị nwere ike ịchọta ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngwa ndị na-enye anyị ohere ịrụ otu ọrụ a, na-enweghị iburu n'uche nsonaazụ ikpeazụ, nke na-ahapụkarị ọtụtụ ihe ịchọrọ.
Lossless Photo Squeezer, bụ ọkachamara compressor nke na-enye anyị ohere belata nha foto na ụdị PNG, JPG na GIF na enweghị enweghị ogo, n'ụzọ dị otu a anyị agaghị enwe ike ịkekọrịta ha ngwa ngwa, mana chekwaa ohere mgbe ịchekwaa ha . Ngwa a nwere ike ibubata akwụkwọ ndekọ aha niile, yabụ na ọ dịghị mkpa ịga otu n'otu na-adọkpụrụ ha n'ime ngwa ahụ iji mepụta usoro ahụ.
Lossless Photo Squeezer na-enye anyị ohere ịpịkọta onyonyo site na 20%, na-ejigide mkpebi mbụ ma ọ bụrụ na anyị ejiri ọnọdụ ahụ na enweghị ogo. Ọ bụrụ na anyị tinye ọnọdụ ọnwụ, ohere ga-ebelata ruo 50%, mana anaghị atụ aro ka ị jiri ya belụsọ ma anyị anaghị echebara ihe anyị nwere ike inweta anya. 8-bit PNG mode nke na-agbanwe 24-bit png na 256-agba png na-azọpụta ohere 60%.
Ngwa a nwere ọnụahịa dị mma nke euro 6,99, mana maka obere oge enwere ike ibudata ya n'efu, ọbụlagodi n'oge edere isiokwu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mmemme Mac » Belata oke foto gị na Lossless Photo Squeezer
Bụ acha ọla edo dị na 12-inch nke MacBook ụbọchị a gụrụ?